I-Romantic Beach Retreat - iibhloko ezi-1.5 ukuya elunxwemeni w/AC
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguAllie
Inkampani yethu yokucoca isebenzisa iintsholongwane ezivunyiweyo ze-EPA kulo lonke utshintsho lwethu. Njengesiqhelo, sicoca zonke iilinen kwaye sibulala iintsholongwane kuzo zonke iindawo zokucoca. Unokuqiniseka ukuba iyunithi yethu iya kubulawa iintsholongwane kwimigangatho evunyiweyo yeCDC ngaphambi kokufika kwakho.
1 ibhlokhi ukuya edumileyo Tourmaline Surf Park & Beach, Romantic yethu Luxury Beach Retreat igqibelele ukuphumla San Diego ukubaleka. Ilungele izibini, iihambo zamantombazana, iingcali zoshishino, okanye nabani na ojonge ukubalekela kwidolophu yethu elunxwemeni!
Ikhefu njengendawo yasekhaya!
Le condo intle yayiyilwe ngobuchwephesha kwaye yahonjiswa ngezixhobo zentsimbi, ikhaphethi entle kunye nethayile, kunye nayo yonke ifenitshala entsha ye-beachy chic kunye nokuhonjiswa. Inegumbi lokulala eli-1, igumbi lokuhlambela eli-1, indawo zokuhlala ezi-2 zangaphandle, igumbi lokuhlala langoku elunxwemeni elinescreen esisicaba seTV kunye nentambo, kunye nekhitshi elinyulwe ngokupheleleyo. Kwaye ukuyenza ibengcono, sine-AIR CONDITIONING!
Ikhitshi ixhotyiswe ngayo yonke into oyifunayo-i-dishwasher, isinki ephindwe kabini, i-microwave, ifriji enamanzi ahluziweyo kunye ne-icemaker, isitovu kunye ne-oveni, i-blender, i-toaster, zonke izixhobo zasekhitshini ekufuneka uzipheke ekhaya. Sikwaqinisekisa ukuba unentaphane yeetawuli zephepha, iitawuli zesitya, izinto zokucoca, isepha yesitya, into yokucoca, izipontshi, njl.njl. Ukwenza intsasa yakho iphumle kangangoko, nceda ukonwabele ikofu, iti, & zonke izilungiso! Sisanda kongeza iGRILL entsha kraca kwipatio yangaphandle kuzo zonke iimfuno zakho zeBBQing!
Ngexesha lakho laselwandle, sinikezela ngezitulo ezi-2 zaselwandle zikaTommy Bahama, iambrela, iitawuli zaselwandle, kunye nazo zonke izinto ezithunyelwayo ozifunayo ukuze uqeshe abakhenkethi baselwandle, iibhodi zokusefa, kunye neebhodi zokubheqa!
I-WIFI enesantya esiphezulu isebenza kuyo yonke iyunithi, kuzo zombini iipati, nangaphandle kwintendelezo yoluntu.
Igumbi lokulala liqhayisa ngebhedi entsha elingana noKumkani kunye neelinen zodidi oluphezulu, i-topper ye-foam yememori, ngaphezulu kwemiqamelo yomgca, umnyango otyibilikayo okhokelela kwipatio epholileyo enamakhethini amnyama, indawo yokubeka imithwalo, i-HUGE closet, kunye neehangars.
Igumbi lokuhlambela ligcwele izinto zangasese zokuthotyelwa - ishampu, i-conditioner, ukuhlamba umzimba, i-lotion, iilinen, kunye nesomisi seenwele. Ihlaziywe ngendlu yangasese yeToto entsha kunye neeshawara ezimbini.
Le renti iza neendawo ezi-2 zokupaka ezinikezelweyo ezilungele xa umema abahlobo bakho kwisidlo sangokuhlwa!
4.94 · Izimvo eziyi-179
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi179
Ifakwe kunxweme oluseMantla ePasifiki, indawo ephumlileyo elunxwemeni kwindawo ezolileyo yedolophu eneendawo zokutyela ezinomtsalane, iivenkile zekofu, iibha, izitudiyo zokuqina, kunye neevenkile. I-Gelson's, imarike yendawo yokuhlala, ikwibhloko efanayo ne-condo ngoko ungakhathazeki malunga nokulibala nantoni na!
Ibhloko enye nje ukuya kwiTourmaline Surf Park kunye noLwandle, eyaziwa ngamaza ayo afanelekileyo unyaka wonke kunye nokuhamba okude okuqengqelekayo. Ngaphandle kwe-epic surf, unxweme luhle, kwaye unxweme lukulungele ukuqubha kunye nokuphumla. Ngamaqondo obushushu angaphandle akhululekileyo unyaka wonke kunye ne-beach-back-back vibe uya kuyifumana yeyona ndlela ifanelekileyo yokubaleka.
I-Boardwalk edumileyo iqala nje iibhloko ezi-3 emazantsi e-condo. Kukulungele ukuhamba ngokukhululeka okanye ukukhwela ibhayisekile (kunye nabantu ababukeleyo) okanye umise isiselo okanye isidlo sangokuhlwa. Ungamisa naphi na kwaye uhlale elunxwemeni.
Njengoko usiya kwiibhloko ezimbalwa eMazantsi, uya kubetha eyona ndawo iphambili ye-PB nge-TONS yeendawo zokutyela, imivalo, ubomi basebusuku, iivenkile, iilwandle kunye nolonwabo. Hamba ngakumbi kwaye uya kufumana iMission Beach nayo yonke into efanayo kunye neBelmont Park kunye nezinye izinto ezifanayo.
Imizuzu nje embalwa eMantla yi-Bird Rock/La Jolla, eqhayisa ngeWindansea Beach edumileyo ene-epic surf kunye nonxweme oluhle. Uya kuziva ngathi useHawaii ukuba uchitha imini apho.
Simalunga neekhilomitha ezili-10 kumntla wedolophu yaseSan Diego kunye nesikhululo seenqwelomoya.
Umbuki zindwendwe ngu- Allie
Originally from Seattle, I've lived in Pacific Beach for 10 years! I can now officially be called a local.
Sihlala phantsi kwesitrato kwaye siyafumaneka 24/7 ukukunceda ngazo naziphi na iimfuno zeholide ngexesha lokuhlala kwakho. Ukuba asifumaneki ukuba sidibane nawe ngexesha lokungena, kukho ibhokisi yokutshixa.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- San Diego